Bytytosis နည်းပညာနဲ့ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ semicons ရှားပါးမှုရဲ့ နောက်ကွယ်က ဉာဏ်ရည်တုချစ်ပ်တွေ ထုတ်လုပ်ဖို့ စတင် - Pandaily
Categories: Industry ကိုPeter Catterall မတ် 17, 2021 မတ် 17, 2021 မှာ Posted
Founded in 2012 by Zhang Yiming, ByteDance has surged to the forefront of the international tech scene. (photo source: AFP)
သည်ဆုံးဖြတ်ချက်နဲ့ ပတ် သက်တဲ့ သတင်းတစ်ပုဒ်ကို အင်္ဂါနေ့ကစတင်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပြီး သည်ကုမဏီဟာ အွန်လိုင်းကနေ သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းမှုတွေဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပြီး ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ အတွေ့အကြုံရှိမှုတို့နဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ လျှပ်ကူးပစ္စည်းထုတ်လုပ်မှုကို တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ သည်ရိုက်နှက်မှုဟာ ဘေဂျင်းအခြေစိုက် အင်တာနက်နည်းပညာကုမဏီတစ်ခုဖြစ်တဲ့ TikTok က သူ့ရဲ့ပြည်တွင်းသက်တူရွယ်တူတွေကို တုန်ခါစေတဲ့ လေသံနဲ့ အခြားထုတ်ကုန်တွေကို ဆက်တိုက်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါတယ်။
ကုမ္ပဏီရဲ့ကြေညာချက်ကိုအတည်ပြုပြီးနောက် သည်လုပ်ငန်းကိုချဲ့ထွင်ဖို့ စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ AI Chip ထုတ်လုပ်ရေးနယ်ပယ်ကိုSouth Warning Post သတင္းအရ.
Topics: မြင်ကွင်းTikTok ကားပိုင္ရွင္ ဘိုက္က အလိုအေလ်ာက္ ေမာင္းႏွင္ ရိုက္ႏွက္တာေတြကို QCraft Investment က ၂၅ သန္း ရရွိတယ္လို႔ သတင္းေတြက ဆိုပါတယ္။
ဒီပစၥည္းေတြဟာ စားသံုးမႈရဲ႕ အေျခခံအဂၤါျဖစ္တဲ့ အီလက္ထေရာနစ္ပစၥည္းေတြ၊ ဘိုက္႐ိုက္စ္ေတြ၊ အဆင့္ျမင့္ဥာဏ္ရည္တုေတြကို ထုတ္လုပ္ေပးႏိုင္ၿပီး ေခတ္မီဆန္းျပားတဲ့ ခ်စ္ပ္စ္ေတြကို အသံုးျပဳထားတဲ့ ဂိုရီစနစ္ေတြနဲ႔ စက္ေတြရဲ႕ လုပ္ေဆာင္ခ်က္ေတြကို က်ယ္ျပန္႔စြာ ေဖာ္ေဆာင္ေပးႏိုင္မွာ ျဖစ္ပါတယ္။
သည်လှုပ်ရှားမှုဟာ တရုတ်နဲ့အနောက်အုပ်စုအစိုးရတွေ တင်းမာမှုတွေဆက်တိုက်မြင့်တက်နေချိန်မှာ နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ပြဿနာတွေထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။ ဘေဂျင်းနဲ့ ဝါရှင်တန်ကြား အငြင်းပွားမှုဟာ အထူးအထွက် အထိပ်ရောက်ပြီး ဒီပဋိပက္ခကို ကြာရှည်ခံတယ်လို့ ဖော်ပြလေ့ရှိပါတယ်“ နည္းပညာစစ္ပြဲ” .
အမေရိကန်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးဝန်ကြီးဌာနက ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဩဂုတ်လမှာ ကန့်သတ်ချက်တွေထုတ်ပြန်ပြီး နိုင်ငံခြားချစ်ပ်ပြားထုတ်လုပ်သူတွေအားလုံးကို အမေရိကန်နည်းပညာအသုံးပြုခွင့်လိုင်စင်ရယူဖို့ တောင်းဆိုလိုက်တဲ့အတွက် ကုမ္မဏီတွေနဲ့ အရောင်းအဝယ်မဖြစ်ခင်မှာ တရုတ်အီလက်ထရွန်းနစ်ထုတ်လုပ်သူ ဟွာဝေးက သည်ကိရိယာတွေကို ဝင်ရောက်နိုင်စွမ်းကို အကြီးအကျယ် ရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါတယ်။ အကဲခတ်များက “အပေးအယူ” ဟု ခေါ်သော ကန့်သတ်ချက်များသေမင်းတမန်သည်စွပ်စွဲချက်တွေဟာ ကုမဏီရဲ့ ပစ္စည်းကိရိယာတွေကို စောင့်ကြည့်ဖို့ အမေရိကန်နိုင်ငံသားတွေကို ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး ဒါဟာ အမျိုးသားလုံခြုံရေးကိုခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်စေလိမ့်မယ်လို့ ဆိုပါတယ်။
အခုဖြစ်နေတဲ့ နည်းပညာစစ်ပွဲတွေကြောင့် တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာ နိုင်ငံခြားကနေ ထုတ်လုပ်သူတွေဆီကနေ ချစ်ပ်ပြားရယူဖို့ ခက်ခဲလာနေပါတယ်။ ပိုဆိုးတာက သရဖူ အသစ္က နမိုးနီးယား ကပ္ေရာဂါရဲ႕ စီးပြားေရးကို ႐ိုက္ခတ္မႈ ျဖစ္ေစတယ္ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လျှပ်ကူးပစ္စည်း ပြတ်လပ်မှုစားသုံးသူ လိုအပ်ချက်ကြောင့် ထုတ်လုပ်သူတွေကို အမီလိုက်နိုင်အောင် ဆောင်ရွက်နေပါတယ်။
ဤဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကို တန်ပြန်နိုင်ရန် တရုတ်အစိုးရက ပြည်တွင်း နည်းပညာကုမ္ပဏီများအပေါ် မှီခိုအားထားမှု လျှော့ချရန် ကြိုးပမ်းခဲ့သော်လည်း နိုင်ငံတကာ ထောက်ပံ့ရေး ကွင်းဆက်များ ဖူလုံမှု ပိုမိုကြီးမားသောကြောင့် စီးပွားရေးနှင့် ပထဝီနိုင်ငံရေးအရ အားသာချက်များ ယူဆောင်လာမည် ဖြစ်သည်။
လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာက Huawei, Lenovo နဲ့ Xiaomi အပါအဝင် တရုတ်နည်းပညာကုမ္ပဏီတွေဟာ ကမ္ဘာ့ဈေးကွက်မှာသိသိသာသာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့ တရုတ်ပြည်တွင်းလုပ်ငန်းတွေကို လိုအပ်တဲ့ချစ်ပ်တွေထုတ်လုပ်မှုက နောက်ကျကျန်နေဆဲဖြစ်ပါတယ်။
ယခုလအေစာပိုင္းက စက္မႈႏွင့္သတင္းအခ်က္အလက္ဌာန (MIIT) အႀကီးအကဲ Shaw Yukyung Shengmin က တ႐ုတ္အစိုးရ၏ “အားသြန္ခြန္စိုက္ ပံ့ပိုးေပးမည္” ဆိုေသာ ျပည္တြင္းခ်စ္ပ္ျပားထုတ္လုပ္သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ လွ်ပ္ကူးပစၥည္းေစ်းကြက္အား ပိုမိုျမႇင့္တင္ေပးရန္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။
ဘိုက္သည္ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္တြင္ ဘီလ်ံနာသူေဌးႀကီး ဂ်န္မင္ကို စတင္ထူေထာင္ခဲ့ၿပီး မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း Frontier International Technologies of the Frontier တြင္ ပါ၀င္ခဲ့သည္။ ၂၀၁၆ ခုနှစ်က စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့တဲ့ ဗီဒီယိုဟာ ဆိုရှယ်မီဒီယာပလက်ဖောင်းမှာ လှုပ်ခါနေတဲ့ အသံချဲ့စက်က သူ့ရဲ့ သတင်းနဲ့ အကြောင်းအရာတွေကို ခေါင်းစဉ်တပ်ပြီး ဝန်ဆောင်မှုပေးခဲ့ပြီးနောက် သည်ကုမဏီက အကြံပြုစာတွေကို ဝေမျှခဲ့ပါတယ်။ ေနာက္ပိုင္းတြင္ TikTok ၏ အမွတ္သညာျဖင့္ ႏိုင္ငံျခားေစ်းကြက္သို႔ ျဖန္႔ခ်ိခဲ့သည့္ နာမည္ေက်ာ္ Platform တစ္ခုအရှုပ်အထွေးတွေလည်း ဖြစ်လာနိုင်ဝါရှင်တန်ဒီစီ နဲ့ ဘေဂျင်းကြား နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီး အငြင်းပွားမှုတွေ ရှိနေပါတယ်။
Tags: *ByteDance | Artificial Intelligence | Chip Maker | Chips | semiconductor | tech giants